Nagu saabsan - Wilk International Trade (Weifang) Co., Ltd.
Ganacsiga Caalamiga ah ee Wilk (Weifang) Co., Ltd.waa shirkad dhammaystiran oo isku dhafan cilmi-baarista sayniska, soo-saarka iyo iibinta. Waxay ku taalaa Laizhou City, Gobolka Shandong, saldhig wax soo saar weyn oo loogu talagalay mashiinada dhismaha, mashiinada dhismaha iyo mashiinada beeraha ee dalka. Wax soosaarka ugu weyn: Loaders Loaders, qodayaal, Is Loading Mashiinka Mashiinka, 4 wheel wheel forklift, Backhoe Loader iyo makiinado yaryar oo dhisme ah. Waqtigan xaadirka ah, ganacsigu wuxuu ka kooban yahay in ka badan 60 waddan iyo gobollo ay ka mid yihiin Japan, South Korea, Brazil, Mexico, Dubai, Australia, Koonfur Afrika iyo Bariga Dhexe, Aasiya Dhexe, Koonfur-bari Aasiya, iyo Midowga Yurub.
Shirkadeena inta badan waxay soo saartaa xamuulka, qashin qubka, Iskeelka Iskuduwaha Iskuduwaha, 4 gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida gawaarida iwm. Waxyaabaha badanaa waxaa loo iibiyaa in ka badan 20 gobol oo Shiinaha ah waxaana loo dhoofiyaa daraasiin dalal iyo gobollo ah oo ku yaal Afrika, Koonfur-Aasiya, Koonfurta Ameerika iyo Ruushka.
Shirkaddu waxay qaadatay tiknoolajiyadda Jarmalka si ay u soo saarto, u uruuriso waayo-aragnimo, isla markaana isku darto horumar joogto ah oo laga helo macluumaadka jawaab celinta ee ay adeegsadayaasha ka isticmaala adduunka oo idil, iyagoo si buuxda u tixgelinaya shuruudaha dhabta ah ee isticmaalayaasha, waxayna si tartiib tartiib ah u aasaaseysaa nidaam kormeer wax soo saar tayo sare leh oo tayo sare leh leh iyo kaamil ah, dhakhso ah oo waqtigii iibka ka dib qaybaha adeegga bixinta adeegga. Marka la eego qaabka horumarinta ganacsiga, waxay la jaanqaadaysaa isbeddelka horumarka ee ganacsiga elektaroonigga ah, waxayna sahamineysaa waddo hal-abuur leh oo ah "Internet + soo-saar dhaqameed" ku habboon horumarinteeda.
Tayada iyo waxqabadka rarkeena giraangiraha iyo 4 gaari xamuul ah oo forklift ah ayaa ku jira booska hogaaminta ee warshadaha wadanka oo dhan waxaana sifiican u helay dadka isticmaala. Hadda, "WIK" astaanta gawaarida gawaarida iyo Is-dhexgallada Isku-dhafan ee La-taaban karo ayaa helay aqbalaad ay ka helaan ganacsatada waxayna ka isticmaalaan Shiinaha oo dhan.
Waxaan diirada saareynaa tayada, waxqabadka waxaanna tixgelin siineynaa dadka isticmaala sida had iyo jeer. Maareynta, waxaan ku guuleysanay heer cusub anagoo qaadanay ISO9001: 2000 nidaamka maaraynta tayada caalamiga ah.
Falsafadda shirkadeed ee shirkaddu waa: raadinta runta iyo hal-abuurnimada, raadinta badbaado xagga tayada ah, raadinta horumar leh hal-abuurnimada teknolojiyada, raadinta hubsiimo leh adeeg wanaagsan oo qumman, ka sarreynta nafteenna, iyo ku dadaalidda abuuritaanka summad caalami ah. Iyo R&D iyo hal-abuurnimo aan kala go 'lahayn. U samaynta alaabooyin iyo adeegyo tartan u ah macaamiisheenna.